कोहलीले तोड्न सक्लान् सचिनका ३ कीर्तिमान? – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौंः विराट कोहली अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रवेश गर्दा उनलाई सचिन तेन्दुलकरको उत्तराधिकारीको रुपमा हेरिएको थियो । अहिले कोहली उच्च फर्ममा पनि रहेका छन् । सचिन र कोहली अलग–अलग समयमा आफ्नै तरिकाले क्रिकेट पनि खेल्दै आएका छन् ।
भारतीय कप्तान कोहलीले पछिल्लो ६ वर्षमा सवै फरम्याटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । उनी सचिनले बनाएका रेकर्डहरु तोड्ने संघारमा पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बेला बखत चर्चा पनि गर्दै आएका छन् ।
१. सबैभन्दा बढी एक दिवसीय शतक
विराट कोहलीले करियरमा अहिलेसम्म २४२ एकदिवसीय क्रिकेट खेल्दै ४३ शतक बनाएका छन् । सचिनले एक दिवसीयमा ४९ शतक बनाएका छन् । जुन सर्वाधिक शतकको रेकर्ड पनि हो । कोहलीसँग यो वर्ष अर्थात सन् २०२०मा सचिनको शतकको रेडर्क ब्रेक गर्न सक्ने समय रहेको छ ।
कोहलीले २०१९ मा एक दिवसीय क्रिकेटमा रनको हिसाबले सफल नभए पनि जम्मा ५ वटा शतक बनाएका थिए । यदि उनले २०२० मा आफ्नो लयलाई कायमै राख्न सके सचिनले बनाएको शतकको रेकर्ड आफ्नो नाममा गर्ने छन् । त्यसका लागि अब कोहलीलाई ७ शतकको आवश्यकता छ । यस्तो भएमा सचिन भन्दा धेरै कम म्याचमा उनले यो रेकर्ड कायम गर्न सक्ने छन् ।
२. तिव्र गतिमा १२ हजार रन
एक दिवसीय क्रिकेटको इतिहासमा अहिलेसम्म पाँच जना ब्याट्सम्यानले मात्रै १२ हजार बढी रन बनाएका छन् । यो उपलब्धि हासिल गर्दा सचिनले सर्वाधिक चाँडो गरेका थिए । यो रनको आँकडा पार गर्नका लागि सचिनलाई ३०० पारि आवश्यक परेको थियो । अरु चार जना खेलाडीले ३०० भन्दा धेरै पारिमा गरेर पुरा गरेका थिए । यस्तोमा भारतीय कप्तान कोहलीले २३३ पारिमा ११ हजार ६ सय ९ रन बनाइसकेका छन् । १२ हजार रन पुरा गर्नका लागि ३९१ रनको आवश्यकता रहेको छ ।
३. घरेलु मैदानमा सर्वाधिक शतक
भारतीय टिमका वर्तमान कप्तान विराट कोहलीले अहिलेसम्म एक दिवसीय क्रिकेटमा लगाएका ४३ शतक मध्ये १९ शतक घरेलु मैदानमा बनाएका छन् । तेन्दुलकरले सर्वाधिक एक दिवसीय शतक बनाउँदा २० शतक भारतीय मैदानमा बनाएका थिए । यो रेकर्ड बराबरी गर्नका लागि कोहलीलाई १ शतकको आवश्यकता छ भने तोड्नका लागि २ शतक बनाउनु पर्ने छ । भारतीय भूमिमा यस वर्ष धेरै एक दिवसीय क्रिकेट रहेकाले पनि कोहलीबाट यो रेकर्ड तोडिने विश्वास गरिएको छ । नेप्लिजबाट साभार
ट्याग्स: विराट कोहली, सचिन तेन्दुलकर